Ukwahlukahluka kweIndiya | Ukuhamba kwe-Absolut
Ngeli xesha siza kuthetha ngalo Iintlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo zaseIndiya. I-Indiya ingaphakathi kwe-Indomalaya ecozone, kwaye ithathwa njenge Ilizwe eline-megadiverse, kunye nobukho bezilwanyana ezanyisayo, iintaka, izilwanyana ezirhubuluzayo, izilwanyana eziphila emanzini nasemanzini kunye neentlobo zezityalo.
I-Indiya yahlukile amahlathi namahlathi ashinyeneyo, uninzi lwazo, lukwiiAndaman Islands, kwintshona yeGhats, nakumantla mpuma eIndiya.
Phakathi kwezinye iintlobo ezikhoyo Ukusuka e-Indiya sifumana inkawu yaseNilgiri, isele laseBeddome, ingonyama yaseAsia, ingwe yaseBengal, kunye nexhalanga elimhlophe laseRashiya, ukubala nje ezimbalwa. Kuqheleke kakhulu ukubona iinkomo, iinyathi, iibhokhwe, iingonyama, amahlosi, iindlovu zaseAsia, njl. EIndiya.
Kuya kuba ngumdla kuwe ukwazi ukuba i-Indiya ineendawo zokugcina izilwanyana zasendle ezingaphezu kwama-500 kunye ne-13 yeendawo eziphilayo kunye nemigxobhozo engama-25.
Uhlaselo olonakalisayo lomntu kule minyaka ilishumi idlulileyo luye lwabeka emngciphekweni izilwanyana zasendle zaseIndiya. Ukuphendula koku, inkqubo yeepaki zesizwe kunye neendawo ezikhuselweyo zasekwa ngo-1935 zaza zandiswa kakhulu. Ngo-1972, i-Indiya yamisela uMthetho woKhuselo lweNdalo kunye neProjekthi Tiger ukukhusela indalo.
Izityebi nezityebileyo zaseIndiya ziye zanefuthe elikhulu kwinkcubeko edumileyo yommandla. Izilwanyana zasendle zaseIndiya bezingumbandela wamabali amaninzi kunye neentsomi ezinje ngePanchatantra, iJataka Tales, kunye neJungle Book.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukwahlukahlukana kweIndiya